News Collection: आर्थिक आक्रामकतातर्फ चिनियाँ कूटनीति
आर्थिक आक्रामकतातर्फ चिनियाँ कूटनीति
दस वर्षदेखि खोजिएका अल-कायदा अगुवा ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानी भूमिमा मारिएपछिको प्रतिकूल अवस्थामा समेत पाकिस्तानलाई खुलेर समर्थन गर्ने थोरै राष्ट्रमध्ये चीन पनि थियो । चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए, 'अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा जेजस्तो परिवर्तन आए पनि चीन र पाकिस्तान सदैव असल छिमेकी, असल दाजुभाइ, असल साझेदार र असल मित्रका रूपमा रहनेछन् ।' (फाइनान्सियल टाइम्स, लन्डन, १९ मे २०११)नेपालका लागि नवनियुक्त चिनियाँ राजदूत याङ होउलानले गत सोमबार कान्तिपुर र काठमान्डू पोस्टमा प्रकाशित आफ्नो अन्तरवार्तामा नेपाल-चीन सम्बन्धलाई त्यसैगरी चित्रण गरेका छन्, 'राजनीतिक रूपमा चीन र नेपाल असल छिमेकी, असल दाजुभाइ, असल साझेदार र असल मित्रको सम्बन्धमा छन् ।'
चीनका निम्ति पाकिस्तान मुस्लिम-संसारसँग सम्बन्ध राख्ने, भारत र अमेरिकालाई सन्तुलनमा राख्ने सामरिक माध्यम हो । त्यसको तुलनामा नेपाल चीनको पछिल्ला दिनमा प्राथमिकतामा परेको छिमेकी हो । त्यो किनभने, राजदूत याङकै शब्दमा, 'चीनका १४ छिमेकीमध्ये तिब्बत स्वायत्त प्रदेशसँग सीमा जोडिएको छिमेकी भएकाले नेपालले चीनको छिमेक-कूटनीति र समग्र कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्छ ।'
यो त बुझिएकै कुरा हो- चीनका निम्ति नेपाल तिब्बती मामिलामा कारण बढी महत्त्वपूर्ण छ । नेपाली भूभागबाट आफ्नो सर्वाधिक संवेदनशील भूखण्डमा कुनै किसिमको उपद्रव नमच्चियोस् भन्नेमा ऊ सदैव चनाखो देखिन्छ । तर यो पनि सत्य हो- तिब्बती शरणार्थीले यदाकदा काठमाडौंका सडकमा उग्र प्रदर्शन गरे पनि त्यो नियन्त्रणबाहिर हुँदैन र त्यसको गुञ्जन उत्तरको चिनियाँ सीमासम्म त खासै कहिल्यै पुग्दैन । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, के तिब्बतकै कारण मात्र नेपालमा चीनको चासो बढेको हो त ? फेरि पनि याङकै भनाइ- 'चीन र भारत दुई उदीयमान अर्थतन्त्रका बीचमा अवस्थित रहेको नेपाल चीन र दक्षिण एसिया जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सम्भाव्य र व्यापारिक मार्ग हो ।'
वास्तवमा अहिले चीन भनेकै आर्थिक महाशक्ति हो जो गत फेबु्रअरीमा जापानलाई उछिनेर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । अबको उसको लक्ष्य सकेसम्म कम अवधिमै अमेरिकालाई उछिनेर पहिलो नम्बरमा पुग्नु हो । सम्भवतः त्यतिन्जेलमा उसको राजनीतिक महवाकांक्षा पनि राम्रैसँग प्रकट हुन थाल्नेछ, जसले अन्ततः चीनको अहस्तक्षेपकारी वैदेशिक नीतिसमेत इतिहासको विषय बन्नेछ । अहिले पनि उसको आर्थिक महत्त्वाकांक्षाभित्र राजनीतिक अभीष्ट जोडिएको बुझ्न कठिन छैन, जसको क्षेत्रीय आयाम नेपाल लगायत सिंगो दक्षिण एसियामा महसुस हुन थालिसकेको छ ।
राजतन्त्रको पतनसँगै अमेरिकाको र त्यसको केहीपछि बेलायतको नेपाल-नीति मूलतः भारतीय नजरमा आधारित हुन थालेको छ । अनि भारत स्वयंको कूटनीतिचाहिं खुला राजनीतिक भूमिकामा रूपान्तरित भएको छ जसबाट लाभभन्दा बढी हानि भएको लेखाजोखा नयाँदिल्लीले गर्न थालेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयको सहयोग पाउने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल अफगानिस्तान र भुटानपछि तेस्रो नम्बरमा पर्छ । लन्डनको चाथम हाउसद्वारा गत मे महिनामा प्रकाशित 'इन्डियाज डेभ्लपिङ इन्टरनेसनल रोल' शीर्षक प्रतिवेदनमा समेटिएको तथ्यांकअनुसार सन् २००५/०६ यता भारतले नेपाललाई कुल ७ अर्ब ८३ करोड भारतीय रुपैयाँबराबरको आर्थिक एवं प्राविधिक सहायता दिइसकेको छ । यसबाहेक अदृश्य माध्यमबाट प्रवाह हुने रकमको फेहरिस्त छुट्टै छ । यति धेरै लगानी गर्दा पनि भारतले सोचेजस्तो राजनीतिक अनुकूलता यहाँ सिर्जना भइरहेको छैन, बरु 'भारतविरोधी' जनमत निकै बढेको छ । नेपालको घरेलु राजनीतिमा सिधै जोडिने गरेकाले यस्तो भएको हो । चीन यस्तो जोखिमबाट सकभर जोगिन चाहन्छ, त्यसैले आर्थिक खेलाडीका रूपमा नेपालमा छिर्न खोज्दै छ । तर त्यससँगै उसको जेजति राजनीतिक भूमिका खुल्दै जानेछ, बेइजिङ पनि नयाँदिल्लीझैं क्रमशः विवादको घेरामा तानिँदै जाने निश्चित छ ।
नेपालमा चीनको आर्थिक कूटनीतिका मूलतः दुइटा पाटा छन् । पहिलो, नेपालमै चिनियाँ लगानी र व्यापार बढाउने । दोस्रो, नेपाली भूमि भएर भारत र दक्षिण एसियामा आर्थिक साम्राज्य फैलाउने । अहिले नेपाल र चीनलाई एउटै कोदारी राजमार्गले मात्र जोडेको छ । चिनियाँ सहयोगमा निर्माणाधीन रसुवा-केरुङ सडक सञ्चालनमा आएपछि भविष्यमा त्यो त्रिशूली-गल्छी-रक्सौल हुँदै विशाल भारतीय बजार जोड्ने महत्त्वपूर्ण मार्ग बन्न सक्छ । यससँगै दुई देशका अधिकारीहरूबीच तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्सेसम्म आइपुग्नै लागेको रेलवे लाइनलाई नेपाली सीमासम्म ल्याउनेबारे पनि निकै चरणमा छलफल भएको छ । पश्चिम नेपालका मुस्ताङ, हुम्लालगायतका नाकामार्फत पनि यातायात चलाउने, थप नाकाहरू खोल्ने चिनियाँ प्रस्ताव पनि विचाराधीन छ । यी सबै योजना चीनको सहज भौगोलिक पहुँच भएको नेपाललाई माध्यम बनाएर स्थलमार्गबाट दक्षिण एसियाली बजारमा प्रवेश गर्ने दीर्घकालीन आर्थिक महत्त्वाकांक्षासँग जोडिएका देखिन्छन् । अहिल्यै निजी क्षेत्रका व्यवसायीले चीनबाट सामान ल्याउने र नेपाल हुँदै भारत पुर्‍याएर बेच्ने 'ट्रान्जिट रुट' को प्रारम्भिक अभ्यास गरिरहेकै छन्, जसलाई सरकारी स्तरबाट व्यवस्थित बनाउन भौतिक पूर्वाधार भएमा गाह्रो पर्नेछैन ।
चीनले अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति हासिल गरे पनि त्यहाँ सामाजिक खाडल निकै गहिरिँदो छ । खासगरी समुद्री नाका भएका पूर्वी भूभागको तुलनामा पश्चिम क्षेत्र निकै पछाडि छ । त्यहाँका बासिन्दालाई समेत नयाँ आर्थिक गतिविधिमा तान्ने र समृद्धिको बाटोमा ल्याउने चीनको केन्द्र सरकारको कोसिस छ । उनीहरूलाई नेपाल भएर भारतसँग गरिने व्यापारमा संलग्न गराउनसके ठूलो उपलब्धि हासिल हुने चिनियाँ विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
पश्चिम चीनका बासिन्दालाई बढीभन्दा बढी संलग्न गराउने उद्देश्यसहित नेपालमा चीनले आर्थिक लगानी केन्दि्रत गर्न चाहेको बुझिन्छ । चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूको भनाइमा दुई देशबीच सडक र रेलवे विस्तार भएमा दक्षिण एसियालक्षित बढीभन्दा बढी चिनियाँ लगानी नेपालमा विस्तार गर्ने ढोका खुल्नेछ । आर्थिक बाटोबाटै नेपालमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने उनीहरूले ठानेका हुन सक्छन् । यसका निम्ति प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको वामपन्थी गठबन्धनलाई चिनियाँहरूले निकै अनुकूल मानेको उनीहरूको बढ्दो भ्रमण शृंखलाले नै देखाउँछ । गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीको विकासमा तीन बिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने उद्घोष यसैबेला हुनु संयोग मात्र पक्कै होइन । चीन नेपालको जलस्रोत विकासमा पनि दह्रैसँग संलग्न हुन चाहेको देखिन्छ ।
भर्खरै काठमाडौं आएका नयाँदिल्लीस्थित इन्स्िटच्युट अफ डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिस् (आईडीएसए) का एक शोधकर्ताका अनुसार डेढ वर्षयता नेपालमा भारतीय संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूले विविध कारणले जेजति व्यापारिक नोक्सानी भोगेका छन् र यस अवधिमा जुन स्तरमा चिनियाँ लगानी भित्रिएको छ, त्यसलाई पूर्ति गर्न पनि कम्तीमा छ वर्ष लाग्छ । नेपालमा चीनको बढ्दो आर्थिक आक्रामकताले भारतीय योजनाकारहरूलाई निकै चिन्तित तुल्याएको यसबाट पनि देखिन्छ । आफ्नै जोडबलमा खडा भएको मुलुक बंगलादेशमा यस्तै स्थिति बढ्दै जाँदा हाल उसको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार नै चीन बन्न पुगेको छ र त्यहाँ विदेशी लगानी गरेका प्रमुख १० मुलुकहरूको सूचीमा समेत भारत पर्दैन । त्यस्तै परिणति नेपालमा नदोहोरियोस् भनेर दिल्लीको सोचविचार गर्ने वर्ग चिन्तित बन्दै गएको देखिन्छ ।
यसलाई रोक्न चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित पार्न राजनीतिक प्रयत्न गर्ने वा चिनियाँहरूसँगै साझेदारीमा व्यापार-उद्योग र जलविद्युत् परियोजनाहरू विकसित गर्ने नयाँ बाटोतर्फ लाग्ने भन्ने यक्ष-प्रश्न अब भारतको नेपाल नीतिमा जोडिन आउनेछ । अथवा दिल्लीले कठोर नीति नै लिने हो भने अमेरिकासमेतको सहकार्यमा चीनविरुद्ध आक्रामक कूटनीति अपनाउने विकल्प सामुन्ने आउनेछ । सम्भवतः चीन यहीँनेर बढी सतर्क छ ।
नेपालमा आर्थिक लगानी बढाए पनि चीन भारतसँग अहिल्यै राजनीतिक वा कूटनीतिक टकरावमा अल्झन चाहन्न, न त नेपाली भूमिमा भारतीय-अमेरिकी सामरिक गठबन्धनको प्रभाव परोस् भन्ने चाहन्छ । चीनको दीर्घकालीन लक्ष्य अमेरिकालाई उछिन्नु रहेकाले ऊ आफ्नो दक्षिण एसियाली मित्र भारतसँग आर्थिक प्रतिस्पर्धा गरे पनि सामरिक द्वन्द्वमा फसिहाल्ने पक्षमा छैन । कतिसम्म भने भारतसँग दशकौंदेखि थाती रहेको सीमा विवादसमेत बढी नचर्कियोस् भन्नेमा उसको ध्याउन्न छ । भारतलाई संघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेजन र बि्रक (ब्राजिल-रसिया-इन्डिया-चाइना) जस्ता क्षेत्रीय गठबन्धनमार्फत मित्रशक्तिका रूपमा नजिक राख्ने चीनको प्रयास यसैतर्फ केन्दि्रत छ भने अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो बृहत्तर सामरिक सहयात्री बनाउन खोजिरहेको छ ।
बिन लादेनको हत्यापछि 'सेन्टर फर अ न्यु अमेरिकन सेक्युरिटी' नामको संस्थाले जुन २०११ मा तयार पारेको 'बियोन्ड अफगानिस्तान ः अ रिजनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी फर साउथ एन्ड सेन्ट्रल एसिया' शीर्षक प्रतिवेदनले यस क्षेत्रमा अमेरिकाले प्राथमिकता दिनुपर्ने विभिन्न पाँच उद्देश्यहरू पहिचान गरेको छ । त्यसमध्ये एउटा भारतसँग बढ्दो साझेदारीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने छ भने अर्को चीनको फैलँदो प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने विषयमा केन्दि्रत छ ।
चीन र अमेरिकाबीच अहिले मुख्यतः 'साउथ चाइना सी' क्षेत्रमा कसको प्रभाव कति भन्ने सामरिक प्रतिस्पर्धा देखिने गरी बढेको छ । युरोपदेखि अपि|mकासम्म चीनको ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापारिक कारोबार हुने यो समुद्री मार्गमा उसलाई अमेरिकी नेतृत्वमा जापान, अस्टे्रलिया, भियतनाम र भारतसमेतको गठबन्धनले टक्कर दिइरहेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाको यो यस्तो संवेदनशील क्षेत्र हो, जहाँ चीनले कुनै 'सम्झौता' नगर्ने, बरु युद्धको सामना गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ । त्यहाँ यस्तो तनाव भइरहेका बेला नेपाल वा भारतमा द्वन्द्वको नयाँ मोर्चा कदापि खोल्न नहुने, बरु आफ्नो सीमाको सुरक्षित व्यवस्थापन मात्र गर्ने रणनीति चीनले अपनाएको देखिन्छ । तर सन् २००८ मा जस्तै फेरि नेपालबाट तिब्बती मामिला उछाल्ने काम भयो भने के गर्ने ? सम्भवतः यो चीनको अनिश्चित कूटनीतिको सबभन्दा कमजोर कडी हुनेछ ।
नेपालमा भारतीय र अमेरिकीहरू आफूविरुद्ध संयुक्त रूपमा नआऊन् भन्नेमा चीन निकै चनाखो देखिन्छ । चीनले आफ्ना अमेरिकाविज्ञ याङ होउलानलाई नेपालमा राजदूत बनाएर पठाउनुको एउटा कारण यतै कतै सम्बन्धित हुन सक्छ । याङले यसअघि उत्तर कोरियाली मामिलामा चिनियाँ राष्ट्रपतिको विशेष दूतको भूमिका निर्वाह गरेका थिए र त्यस क्रममा कोरियाली प्रायद्वीपको तनाव सुल्झाउन गठित छ राष्ट्रहरू (अमेरिका, चीन, रूस, जापान, उत्तर र दक्षिण कोरिया) को समूहमा चीनको तर्फबाट दुई वर्षसम्म 'डिल' गरेका थिए । त्यस्ता वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई काठमाडौं पठाउनु भनेको चीनले नेपाललाई आफ्नो विश्वव्यापी रणनीतिसँग जोड्न खोजेको सूचक हो । याङ त्यसअघि अमेरिकी सुरक्षा नियन्त्रणमा रहेको अफगानिस्तानमा राजदूत थिए । कोरिया र अफगानिस्तान दुवै ठाउँमा उनको कूटनीतिक कर्म मूलतः अमेरिका लक्षित थियो ।
थाहा भएकै कुरा हो- कूटनीति सधैं आफैंले चाहेअनुसार चल्दैन । थुप्रै वस्तुगत कारणले गर्दा चीनले नचाहे पनि भारत र अमेरिकाबीच सामरिक घनिष्टता बढ्ने र त्यसको प्रतिबिम्ब ढिलोचाँडो नेपालमा पनि देखापर्ने निश्चितप्रायः छ । चीनले नेपालमा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा लुकाउँदै आर्थिक आक्रामकता मात्र बढाउन खोजे पनि त्यसले भारतलाई सशंकित तुल्याइरहेकै छ । त्यस्तो अवस्थालाई तटस्थीकरण गर्न, आफ्नो परम्परागत प्रभाव यथावत राख्न र केही निश्चित स्वार्थ पूर्ति गर्न भारत अझ खुलेर आउन सक्छ । त्यसलाई आफूलक्षित देखेमा चीन पनि अरू सक्रिय हुने, बदलामा भारतीय प्रतिक्रिया झन बढ्ने- एवं रीतले यी दुई शक्तिराष्ट्र शृंखलाबद्ध प्रतिस्पर्धामा उत्रने परिस्थितिले नेपाललाई क्षेत्रीय शीतयुद्धतर्फ समेत लैजान सक्छ । आफ्नै घरमा संक्रमणकालीन अराजकता सल्किरहेका बेला शक्तिराष्ट्रहरूको 'शीतयुद्ध' मा नचाहेर पनि होमिनुपर्ने अवस्था हाम्रानिम्ति अर्को दुर्भाग्य बन्न सक्छ ।